16 mapfupi nyaya dzevanoda zvinyorwa zvipfupi | Zvazvino Zvinyorwa
Nhau pfupi dzinozivikanwa
Carmen Guillen | | Literature
Ipfupi nyaya: mashoma mazwi enhau huru.
Uri kutsvaga mienzaniso yenyaya diki? "Nguva dzeInternet dzakabvumidza mabhuku mapfupi kana madiki kuti ave akakosha pakati pevaverengi vanokurumidza avo vanochengeta nhaurwa imwe-chete haisi yekungoda kuziva chete, asi zvakare mukana wekugadzira yako yega vhezheni yenyaya yakavanzwa." Pakati pemitsara "kana, mune ino kesi, mazwi.
Iyi ndiyo micro-nyaya, inorondedzera mhando ingangove yakadzikisirwa neruzhinji runosanganisira nhoroondo refu yakasimbiswa nevanyori vakaita saCortázar kana Augusto Monterroso, iri dombo rekupedzisira rekona yemhando iyi nekuda kweiyo micro Iyo Dinosaur, imwe yeaya anofungidzirwa se ngano pfupi pfupi nakare.
Asi tisati tavaona, vese vakasarudzwa, isu tichaenda kupindura yakateedzana mibvunzo uye inowanzoitika mibvunzo kana tichitaura nezve micro-nyaya. Kana iwe uchifarira chidzidzo ichi, usazeze kuramba uchiverenga.
Iwe unondiperekedza mune ino ipfupi (uye panguva imwechete yakadzika) rwendo rwekunyora kuburikidza neinotevera 16 micro-nyaya kune vanoda epfupi?
1 Chii chinonzi micro-nyaya? Zvakajairika maficha
2 Nzira yekugadzira Micro-nyaya?
3 10 mapfupi nyaya kune vanoda mabhuku mapfupi
4 Dzimwe nyaya pfupi dzakakurumbira
Chii chinonzi micro-nyaya? Zvakajairika maficha
RAE inotsanangura izwi microstory seinotevera:
Ipfupi nyaya: Kubva ku micro- uye nyaya. 1. m. Nyaya pfupi kwazvo.
Uye ipfupi ipfupi! Ndihwo hunhu hukuru hwerudzi urwu rwerondedzero, iyo inongova nemitsetse mishoma umo munyori anofanirwa kutaura zvese zvaari kuda uye kusiya muverengi achifara, achifunga kana kungonzwa nekuverenga chimwe chinhu chakanaka uye muchidimbu. Kune izvi pane kutaura kwakakurumbira iyo inouya kuratidza zvakafanana: "Izvo zvakanaka, kana zvipfupi, zvakapetwa kaviri"
Uye kunyangwe sezvatakambotaura, iri mhando isingakoshesi, chokwadi chakasiyana. Izvo zvakaoma kwazvo kunyora uye "kutaura" panguva imwechete mumitsara mishoma. Ndichiri neinovhero kana nyaya dzatinadzo mapeji nemapeji kuratidza hunhu kana akati wandei, kugadzira nharaunda, kukudziridza iyo nyaya yacho pachayo, mune iyo micro nyaya yatinofanira kutaura mumitsara mishoma, uye kuzadzisa iyo yakaoma kwazvo pazvose : iyo inoendesa chimwe chinhu kune avo vanotiverenga.
Inoita kunge iri nyore basa, asi ini ndinokuudza kuti hazvisi zvachose. Zvinotora hunyanzvi hwakawanda uye yakareba nguva yakatsaurirwa kugadzira yakanaka micro-nyaya senge dzese dzatichaona pazasi. Asi kutanga, isu tinokuudza maitiro ekugadzira iyo micro-nyaya, chii chekutarisa, ndeapi mazwi kana zvirevo zvekudzivisa uye kuti tingatanga sei neimwe.
Nzira yekugadzira Micro-nyaya?
Semutemo wenguva dzose, iyo micro-nyaya ichave nayo Pakati pe5 uye 250 mazwi, kunyangwe tichigara tichiwana zvinosiiwa, asi hazvisiyane zvakanyanya.
Kunyora iyo micro-nyaya isu tinofanirwa kukanganwa kugadzira ndima yekutsanangura chimwe chinhu chakanangana, saka isu zviripachena kubvisa izvo zvingave zviri zvese kukura, semuenzaniso, yenoverengeka. Taizoenda ku poindi yakakosha kana mugumo yezvedu rondedzero, mairi kungangove neshanduko isingatarisirwe iyo inokatyamadza muverengi. Nenzira iyi, isu tichafanira kukanganwa kutsanangura zvakanyanyisa. Iyi nzira yekunyora ichatibatsira kuwana izwi rakakodzera, mune ino zvirevo zvinotsanangurwa, kutaura zvakawanda nezvidiki.
Nekuita kuti mazwi akanyanya kuverengwa, zvatichaedza kupa kukosha kukuru kune iyo sarudzo yemusoro wenyaya. Haikwanise kungori chero zita, asi isu tichaedza kuita kuti iwo mazwi ari mumusoro abatsire kupedzisa yedu micro-nyaya uye kuti iite yakatonyanya kukosha kana zvichibvira.
Uye zvechokwadi, kana paine mashoma mazwi mune iyo micro-nyaya, isu tichaedza zvakare kutamba nawo iko kunyarara y nyora dzemutauro. Semuenzaniso, vamwe ellipses zvinoenderana nechikamu chechinyorwa chatinovaisa, vanogona kutaura zvakawanda kupfuura chirevo chakazara.
Sezvatakambotaura, kugadzira yakanaka micro-nyaya inyaya yekuwana hunyanzvi sezvazvinoitwa zvinowedzerwazve. Nechikonzero ichi, uye nekuti mazwi evadiki haasati akwana zvakakwana, zvakajairika kuona mumabhuku epuraimari achikumbira vana kuti vanyore nhetembo pfupi kana micro-nyaya nezve chimwe chinhu. Nemaitiro aya tinoedza kuti vana vadiki varondedzere chimwe chinhu (chinhu, chiitiko, nezvimwewo), nemazwi mashoma avanenge vachiri kuziva vasina kutaura zvakawanda.
10 mapfupi nyaya kune vanoda mabhuku mapfupi
Paakamuka, dinosaur rakanga richiripo.
Hunhu uye huwandu, naAlejandro Jodorowsky
Haana kudanana naye, asi nemumvuri wake. Aizoenda kunomushanyira mambakwedza, apo mudiwa wake aive akarebesa
Kurota, naJorge Luis Borges
Muchikamu chakasiyiwa cheIran pane isina kureba shongwe yematombo, isina musuwo kana hwindo. Muye chete kamuri (ine uriri hwetsvina uye yakaumbwa sedenderedzwa) kune tafura yematanda uye bhenji. Mune iro sero redenderedzwa, murume anoita seni anonyora mumavara kuti ini handinzwisise nhetembo refu yemurume uyo mune rimwe sero rinotenderera anonyora nhetembo pamusoro pemurume uyo mune rimwe sero redenderedzwa ... hapana anozokwanisa kuverenga zvinonyorwa nevasungwa.
Ida 77, naJulio Cortázar
Uye mushure mekuita zvese zvavanoita, vanomuka, vanogeza, vanosunga, pefiyumu, vanopfeka, uye nekudaro vanodzokera zvishoma nezvishoma pakuva izvo zvavasiri.
Tsamba, yakanyorwa naLuis Mateo Díez
Mangwanani ega ega ndinouya kuhofisi, kugara pasi, kubatidza rambi, kuvhura bhegi uye, ndisati ndatanga basa rezuva nezuva, ndinonyora mutsetse mutsamba refu uko, kwemakore gumi nemana, ndanyatsotsanangura zvikonzero zvekuzviuraya kwangu. .
Bhaketi nefoshoro, naCarmela Greciet
Nezuva pakupera kwaKurume, Amai vakakurudzirwa kudzikisa masutukesi avo nehembe dzezhizha kubva kumatenga. Akatora t-shirts, nguwani, zvikabudura, shangu ..., akabata bhaketi rake nefoshoro, akabuditsawo munin'ina wangu, Jaime, uyo anga atikanganwa.
Kwakanaya muna Kubvumbi kwese neMay wese.
Fantasma, naPatricia Esteban Erlés
Murume wandaida akasanduka kuita chipoko. Ini ndinoda kuisa yakawanda yemachira softener pairi, kuipisa mweya, uye kuishandisa sehomwe yepasi pahusiku ini ndine zuva rinovimbisa.
Mufaro wekugara, naLeopoldo Lugones
Nguva pfupi munamato wegadheni usati wasvika, murume akasuwa kwazvo aive aenda kunoona Jesu aitaura naFiripi, Tenzi achipedzisa kunamata.
"Ndini Naimi akamuka," akadaro murume uya. Ndisati ndafa, ndaifarira waini, ndaitandara nevakadzi, ndaitandara neshamwari dzangu, ndaishongedza zvishongo zvemhando yepamusoro, uye ndairidza mimhanzi. Mwana wega, hupfumi hwaamai vangu chirikadzi hwaive hwangu ndega. Ikozvino hapana cheizvozvo ini chandinogona; hupenyu hwangu hwava gwenga. Chii chandinofanira kupa icho kune?
"Nekuti panomutswa Tenzi, anotora zvivi zvavo zvese," Mupostori akapindura. Zvinoita sekunge iye akazvarwa patsva mukuchena kwemucheche ...
-Ndakafunga kudaro ndosaka ndiri kuuya.
- Chii chaungamubvunze, mushure mekunge wadzorera hupenyu hwako?
"Ndidzorere zvivi zvangu," murume akagomera.
Ini ndinotora chinzvimbo chekupedzisira kuti ndigovane imwe yenyaya dzangu dzekutanga pfupi, nekuti kunyangwe zvaive zvekufungidzira kupfupi, nyaya dzake uye nyaya panguva yekunyora yanga isati yandiisa nemhando iyi. Ndinovimba unoifarira:
Akasvika netai zvisirizvo.
Akanyepedzera kuenderera mberi nekuverenga.
Nzou yepingi yakadya mumba yekutandarira. #micro #zvinyorwa #story # micro-nyaya pic.twitter.com/hAqNNGByu7
Dzimwe nyaya pfupi dzakakurumbira
Tevere, isu tinokuisira iwe dzimwe diki-diki nyaya dzakapihwa kana kuzivikanwa panguva iyoyo uye vamwe vevasinga zivikanwe vanyori. Tinovimba unovada:
Kutaura uye kutaura, naMax-Aub
Aitaura, aitaura, uye aitaura, uye aitaura. Uye huya utaure. Ndiri mukadzi wemba yangu. Asi musikana uya akakora aingotaura achitaura nekutaura. Kwese kwandanga ndiri, ndaiuya ndotanga kutaura. Akataura nezvese uye chero chinhu, zvakafanana hazvina kuita basa naye. Kumudzinga basa iyeye? Ingadai yaifanira kubhadhara mwedzi mitatu. Kunze kwezvo, angadai aikwanisa kwazvo kundipa ziso rakaipa. Kunyangwe muimba yekugezera: ko kana izvi, ko kana izvo, ko kana kupfuura. Ndakaisa tauro mumuromo make kuti anyarare. Haana kufa nazvo, asi nekusataura: mazwi akaputika mukati make.
Tsamba kubva kumudiwa, naJuan José Millás
Kune zvinyorwa izvo kunyangwe pasina kureba hazvigone kutanga kusvika peji 50 kana 60. Izvo zvakafanana zvinoitika kune vamwe hupenyu. Ndosaka ndisati ndambozviuraya ini, Honor.
Apple, rakanyorwa naAna María Shua
Museve wakaridzwa naWilliam Tell wakanyatsojeka wechipiyaniso unopatsanura apuro iri kuda kuwira pamusoro waNewton nepakati. Evha anotora imwe hafu ndokupa imwe yacho kumukadzi wake kufadza kwenyoka. Aya ndiwo marongero anoita mutemo wegiravhiti.
Zvinotyisidzira, naWilliam Ospina
"I will devour you," akadaro mupfanha uya.
"Zvakaipa kwauri," rakadaro pfumo.
Ichokwadi Nezve Sancho Panza, naFranz Kafka
Sancho Panza, uyo neimwe nzira haana kumbozvirova dundundu nezvazvo, akabudirira, pamusoro pemakore, nekunyora chivalric uye bandit novels, manheru uye husiku, kuti apatsanurane kune yakadai hongu kuna Hongu kudhimoni rake, kwaakazopa zita raDon Quixote, iro raakazvizivisa risingakundike mukushambadza kunotyisa, izvo, zvisinei, nekushaikwa kwechinhu chakatemerwa, uye chaifanira kunge chaive Sancho Panza, hazvina kukuvadza munhu.
Sancho Panza, murume akasununguka, akatevera Don Quixote zvisingaite, pamwe nekuda kweimwe pfungwa yebasa, mukudzungaira kwake, nokudaro achiwana kutandara kukuru uye kunobatsira kusvika kumagumo.
Magirazi, naMatías García Megías
Ndine magirazi ekuona chokwadi. Sezvo ini ndisina kujaira, handimbozvishandisa.
Mudzimai wangu akarara pedyo neni.
Ndichipfekedza magirazi, ndakamutarisa.
Dehenya rematehwe akarara pasi pemachira achirovera padivi pangu, padhuze neni.
Bhonzo rakakombama pamutsago rakanga riine vhudzi remukadzi wangu, nemamonya emukadzi wangu.
Mazino akagwinha airuma mumhepo nekamwe kamwe kemhino aive neplatinamu yemukadzi wangu.
Ndakapuruzira bvudzi ndikanzwa bhonzo, ndichiedza kusapinda mumeso eziso: pakanga pasina kupokana, ndiye aive mukadzi wangu.
Ndakagadzika magirazi angu pasi, ndikasimuka, ndokufamba famba kusvikira hope dzandipa ndikadzokera kunorara.
Kubva ipapo, ndinofunga zvakawanda pamusoro pezvinhu zvehupenyu nerufu.
Ndinoda mukadzi wangu, asi dai ndaive mudiki ndaizove mumongi.
Izvi 16 mapfupi nyaya kune vanoda mabhuku mapfupi ivo vanoshanda sehwaro hweavo madiki zvakavanzika nyaya mune ino diki, asi kwete zvishoma, vhezheni yemabhuku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Nhau pfupi dzinozivikanwa
Alberto Diaz akadaro
Ndatenda nechinyorwa ichi nekuti ini ndiri fan of micro nyaya. Muchokwadi, nekutenda kumusangano wekunyora wekugadzira uyo wandakatanga kuenda muna 2004 kana 2005 uye kuti ini ndakatevera kwemakore akati wandei, ndakatanga kuanyora uye nanhasi.
Nezve iyo yandinoda zvakanyanya, ndine kusahadzika pakati pezvakawanda. Kana ndichifanira kusarudza, ndinonamira ne "La carta", naLuis Mateo Díez.
Kumbundira kubva kuOviedo uye uve nevhiki yakanaka.
Pindura kuna Alberto Díaz
Alberto Makumbo akadaro
Senguva dzose, ndatenda nemaonero ako Alberto. Hugs kubva kuAlicante.
Pindura kuna Alberto Piernas
Antonio Julio Rossello. akadaro
Zvakare ndinofarira izvo zvaunonyora.
Pindura kuna Antonio Julio Rosselló.
Hehehehe, iwe ita zvaunogona 😉 Thanks Antonio! Kumbundirana.
Carmen Maritza Jimenez Jimenez akadaro
Mhoro Alberto. Iyo micro-nyaya inotakura iyo yekugadzira pfungwa yekuti ingave yakareba nyaya ingave iri. Ini ndaida kuziva kana pasina mitemo yekuinyora, semuenzaniso, kuwedzera, kunyangwe ini ndisingafunge kudaro, sezvo ini ndichiona akasiyana ekuwedzera. Ini ndinoda urwu rudzi rwekunyora, ini ndiri kuzozviita.
Iyo micro-nyaya yandinoda zvakanyanya ndeye: Amor 77, naJulio Cortázar.
Pindura kuna Carmen Maritza Jiménez Jiménez
Iyo micro-nyaya ndeye, sekutaura kwako, yekugadzira vhezheni yenyaya, iyo zvakare ine mimwe mitemo yakati siyanei. Iyo micro-nyaya inoratidzirwa nehurefu hwayo hupfupi (hapana miganho asi haifanire kudarika ndima) uye "zvinyararire" zveiyi rondedzero nyaya.
Kunyangwe mune yako kesi ini ndinofunga kuti kudzidzira chero mhando yekunyora kuchave kwakanaka, kana iwe ukawana yakanaka micro-nyaya uye kana iri nyaya yakafanana.
Nezve matanho ekunyora nyaya, ndinokusiira chinyorwa ichi chakaburitswa mwedzi mishoma yapfuura kuitira kuti chikubatsire:
José Antonio Ramírez deLeón akadaro
Nyaya yaPatricia Esteban Eriés ishanduko pane yakasarudzika nyaya yemunyori weMexico Juan José Arreola, «Mukadzi wandaida ave chipoko. Ndiri nzvimbo yemadzviti »
Pindura José Antonio Ramírez deLeón
Mhoroi, José Antonio.
Ndakanga ndisingazive kuti Micro-nyaya yaPatricia Esteban Erlés ishanduro. Juan José Arreola anonzwika kujairika kwandiri uye ini ndaisaziva yake pfupi nyaya. Wataura chokwadi, zvakanaka kwazvo. Kutenda nekugovana.
Kwaziso yekunyora kubva kuna Oviedo.
Cristina Sacristan akadaro
Mhoro Alberto. Chinyorwa chinonakidza chawakaita.
Monterroso's ingangove inonyanya kuzivikanwa uye inoshandiswa semuenzaniso wekuti micro-nyaya inovakwa sei, asi mukusarudza kwako ini ndinoda La Carta naLuis Mateo Díaz, ndinofunga zvakanaka. Uye chechipiri, ndinodawo Unhu uye Huwandu, naAlejandro Jodorowsky.
Kutsvoda kubva kuMadrid
Pindura Cristina Sacristán
Unobvumirana neni, kunyange ini ndaizotora akati wandei (mashanu kana matanhatu) ezvinyorwa. Uye iyo iri muMonterroso ndiyo, pasina mubvunzo, inonyanya kuzivikanwa. Jodorowsky's zvakare yakanaka kwazvo kwandiri.
Iyo Graffo akadaro
"Ndinotengesa shangu dzemwana, dzisina kushandiswa" - Ernest Hemingway
Pindura El Graffo
Mhoroi, El Graffo.
Ndakanga ndatoverenga kare kare, ini handirangariri kupi, iyo Hemingway micro-nyaya. Zvirokwazvo vanhu vazhinji vangazoshamisika kuziva kuti shamwari Ernest akainyora (munhu wese anoibatanidza neinovel).
Iyo inondirova ini senge inotyisa micro-nyaya ine yakanyanya kudzika kubhadharisa. Izvo zviri pachena izvo zviri kunze kweiyo tambo.
Matías Munoz Carreño akadaro
Chokwadi waida kunyora Jorge Luis Borges, asi iye autocorrector.
Pindura kuna Matías Munoz Carreño
Anodiwa Alberto. Ini ndanga ndichiverenga iyo yakakurudzirwa nyaya, uye ini ndakamira paviri; El Sur naBorges naLa noche vakatarisana, naCortázar. Husiku hwaCortázar kumeso kumusoro, 'haana kundisiya ndisina basa', inoudzwa zviri nyore uye zvakare nekudzika. Iri duraini reCortázar. Mushure mekuverenga, ndakaturikira kuti ndiko kurwira hupenyu usati wafa pamwe nekuona kwekuziva. Mudhudhudhu aiziva chokwadi pane dzimwe nguva. Asi kudzika muhupenyu husingazivikanwe, hune hukama neyakare kure, zvinoita kuti tifunge kuti mudhudhudhu aive neruzivo nezvetsika dzeMesoamerican, kana kuti aive neruzivo rwekurota pamusoro pechipo chakaitwa nevaAztec kuna vamwari vavo nekubayira musungwa mu Tembere huru. Musungwa iyeye ndiye, mutyairi wemudhudhudhu anonamatira kuupenyu, achirwa nejoko rinodzvinyirira rerufu. Rwendo irworwo kuburikidza nemumugwagwa uyezve pasi penyeredzi uye padyo nerufu, urwo ruchakonzerwa nedombo kana obsidian banga, zvinoita kuti tidedere. Tinogona kufunga kuti mugari uyu aive emigrig yemweya. Sekureva kwaCortázar, kunyange hazvo iri nguva yakapfuura iri kure uye isu takasiyana neiyo yakapfuura, inogona kunge iri "girazi iro rekutarisa kumeso kwedu." Iyi idimikira yeiyo tsika syncretism yatiri, ndomaonero atinozviratidza mugirazi.
La Noche Boca Arriba yakanaka 🙂 Ndiri kufara kuti wakafarira kurudziro yaCarmen. Shuwiro yakanakisa.
Iyi idimikira kune iyo tsika tsika syncretism zvatiri, ndomaonero atinozviratidza mugirazi rayo.
Deborah Lee akadaro
Zvakanaka sei kuverenga pakati pemitsetse uye fungidzira chinyoreso cheiye akanyora.
Pindura Debora Lee
Padivi peimba yangu panogara murume asingagoni kuverenga kana kunyora, asi ane mukadzi akanaka. Mazuva ano, muchivande kubva kumukadzi wake, uye nekurwadziwa kwangu nekushushikana, akafunga kudzidza. Ndinomunzwa achiroya, semwana muhombe, pane mamwe mapepa andaigara ndichimuudza kuti arase, asi mukadzi benzi chaiye akavasiya vasina hanya vakapararira mune chero chikamu chemba; uye ndinonamata kuna Mwari kuti ndisambodzidza.
Fart Querales. Kubva mubhuku «Urban Ngano».
peter querales akadaro
Mazino angu padhishi anodzima musangano uye anobvarura misodzi inoshanduka kuita kuchema kunorwadza uye kushushikana. Pamberi pegirazi ndinofungidzira iwe uchitya mumusika.
Ndichiri kunyorova, pamberi peserura, handifanire kumirira kwenguva refu. Inonzwika, uye izwi rako semwana rinondidaidza kunonoka. "Izvi hazvigone! Tsvaga mukomana wezera rako! " Ndinoti kwamuri. Ini ndinorembera uye ndichipwanya mazino angu uye rako rakapfava izwi rekuyaruka kumadziro.
Ndinoramba ndichichema, kunyorova.
Pedro Querales. Kubva mubhuku "Unorangarira cayenne yandakupa?"
Pindura Pedro Querales
Girobhu remwenje yemuchina wacho
Panguva yakazosvika nguva yaMarco, vatatu vevashanu vaive vachitamba vaive vatopfuura. Kutinhira kwengoma ichitenderera - ndiwo wega mutemo wemutambo: rega munhu wese autenderedze asati auisa mumusoro wake - wakamuyeuchidza nezvekupenga kwebhasikoro rake paakarova zvigunwe kumashure. Marco aigara achifarira kutora njodzi: diki, hombe kana kunyanyisa, asi anogara ari panjodzi. Vakamupa chombo - hachina kurema kana kureruka, panguva iyoyo isinganzwisisike - uye akarova ngoma nesimba. Akaisimudza ndokuiisa patemberi yake yekurudyi. Paakasimudza musoro wake, akaona girobhu racho rakavhenekera mukamuri nemwenje waro weyero, uye akarangarira paakaba girobhu raive mumba kubva kubhucha. Aya ndiwo matangiro akaita huipi hwenjodzi nenjodzi. "Usabe iwe girobhu mwenje mubhucha!" shamwari dzake dzakamuudza. "Hongu," Marco akapindura. Kwave pakati pehusiku, vakaungana pamberi peimba yebutcher. Marco akabuda mumumvuri uye, achinyangira, akaenda kuvheranda reimba. Imbwa dzakahukura dziri mukati. Marco akamira ndokumirira. Imbwa dzakanyarara. Zvinyatso nyatso uye zvishoma nezvishoma Marco akavhura gedhi diki resimbi, asi ichiri kukanda pamahinji ayo. Imbwa dzakahukura zvakare. Ino nguva yakasimba uye kwenguva refu. Robhoti rerunyararo rwakapa Marco mwenje wegirini zvekare. Akamira pamberi pemusuwo wedanda ndokutarisa pasi: "Welcome" akadaro kapeti yakavhenekerwa nechiedza chakauya nepaburi repasi pemusuwo. Uye aigona kunzwa manzwi ebhucha nemukadzi wake vachivhengana neavo vari muterevhizheni. Akambotura mafemo ndokuzvipfuura. Akazokwazisa minwe yake uye akasunungura girobhu racho. Payakabuda, imbwa dzakahukura zvakare. Vamwe vakatochemedza. Akamira ndokugara akadaro, akagwamba nechando uye asingafambi kunge chifananidzo chipenyu, kwenguva yakareba. Akapedza kuiburitsa ndokudonhedza girobhu rinopisa-mutsvuku mukati memubhedha wakaumbwa wakakomberedza dumbu rake semucheto wezasi weflannel wakakwira. Akadzokera kumashure ndokubuda necheshure kwake, aine mwenje wegirobhu mukunyemwerera kwake uye mukombe, zvaitonhora kare, mumaoko ake.
Mangwana acho Marco aifanirwa kuenda kubutcher kunotengera mai vake mbabvu. Butcher akashatirwa. Vese veropa vakapopota nekutuka apo vakauraya chitunha chakarembera padenga. "Kana ndikamubata ndinomuvhiya" uye ndokunyudza banga rakapinza uye kubvarura nyama isingafarire. “Ndave kumuvhima! Hongu, ndichaenda kumuvhima! Iyo inodzoka! Asi ini ndichave ndakamumirira. ”Ipapo mamiriro acho akave akaomera Marco: mutambo wekati negonzo. Marco akamirira yakaringana nguva, gumi nemashanu kana makumi maviri mazuva, uye zvakare akaba girobhu remwenje kubva kubhucha. Mangwana acho akaenda kubutcher shop kuti aone maitiro avo. Uye akamunzwa achipopota: “Jambwa mbavha! Akaba girobhu rangu zvakare! " akadaro kumutengi apo aivhuna musoro wenguruve nedemo. Vakagara vakadaro kusvika Marco aneta nekuba girobhu remwenje mubhucha. Uye rimwe zuva, husiku, akavasiya vese mumakadhibhokisi bhokisi pamusuwo.
Vatambi vana, vakakomberedza tafura, vakatarisa Marco vachitarisira. Bharari rakazorora patembere yake, Marco akaona girobhu - uye akafunga bhotera reBabironi, panokundwa muhwina - uye pakarepo rakabuda.
Pedro Querales. Kubva mubhuku «Pink Sun»
Iko hakuna kana munhu pano, ingori mafufu echingwa kwese kwese. Ndakakurumidza kuvasimudza kuitira kuti ndisanonotsa kudya kwemanheru kwevana vangu.
Ricardo VMB akadaro
Dr. Benavente, nyanzvi yekopiraiti, aive muEurope uye kuregererwa kwemutengi wedu kwaienderana nepfungwa yake, chiratidzo chakasainwa naiye chaizosarudza chisarudzo chevatongi, vadzidzi vake kuyunivhesiti, saka ndakazviisa panjodzi uye Ndakagadzira siginecha yegweta mumushumo wandakanyora uyo watakakunda nawo kutongwa. Mhosva yekubiridzira, yakakundwa negwaro renhema, chinhu chaunodzidza iwe.
Pindura Ricardo VMB
Jose Constantino Garcia Medina akadaro
Muchiedza chinotonhora chakagadzirwa, mhanza yemupurofesa yaipenya semwedzi wechando.
Vadzidzi, vachinyatsoteerera kushanduka kwemitambo yekubhururuka kwenhunzi, havana hanya netsananguro dzake dze logarithmic.
Bhodhi rakanyunyuta nekufamba kwenguva kune zvisaririra zvechoko zvakasundidzirwa neruoko rwekare rwemurume iyeye.
Bhachi rake, rakashatiswa nekusuwa, rakakwinyana pacheya sekare seari.
Pakarira bhera vakaenda vasina kumutarisa. Misodzi miviri yakayambuka kumeso kwavo ichisanganiswa neguruva rekirasi.
Pindura José Constantino Garcia Medina
Javier Olaviaga Wulff akadaro
«Maziso ako achitamba neake ukuwo miromo yako ichitamba neyangu» - Javier OW
Pindura Javier Olaviaga Wulff
LM Pousa akadaro
Paakamuka, akange asipo.
Pindura LM Pousa
Luis Manteiga Pousa akadaro
Ini ndanga ndatozvinzwa kuti panguva yeRevolution yeFrance, apo mumwe munhu akagurwa gumbo, musoro, watove kure nemuviri, uchiri kutaura mazwi mashoma. Asi, kwandiri, zvinoita kwandiri kuti ndataura zvakawandisa.
Pindura Luis Manteiga Pousa
- Ay, ay, ay! - Mumwe munhu akadaro. "Chii chiripo?" Akadaro mumwe, achisvika. Ndokunyarara.
Ndinonyanya kufarira avo vaLuis Mateo Díez, Cortazar, Lugones, Max Aub, Millás naGarcía Megías.
Pamela Mendez Ceciliano akadaro
Changu chandaifarira chaive Kutyisidzira, naWilliam Ospina, nekuti izvi zvinogona kuchinjika munharaunda yatinogara, sezvo nguva zhinji isu tichida kana kuita zvinogona kutikuvadza zvakanyanya, bakatwa rinouraya mupateri asati agona kuridya.
Pamusoro paWilliam Ospina, munyori uyu ndiColombia uye akahwina mubairo weRómulo Gallegos neruzivo rwake rwekuti "El País de la Cinnamon", inova chikamu chetatu chekukunda kuchamhembe kweSouth America. Zvakare, pakati pemabasa ake rondedzero dzinobuda pachena uye inoverengeka "Mwaka wezhizha usina kumbouya" unokwezva kutarisa kwangu, nekuda kwechirevo chazvinoita.
Pindura kuna Pamela Méndez Ceciliano
Dany J. Urena. akadaro
Iyo micro nyaya yandaida zvakanyanya iLa carta, naLuis Mateo Díez, sezvo zvakanditorera imwe nguva kuyedza kuzvinzwisisa, uye nekuti zvine musoro, munyori anopa nyaya yehupenyu huzere nematambudziko umo munhu akajairika kunzwa nekuremerwa uye kusuruvara, asi iwe wakawana nzira inoshanda yekudzivisa iwo manzwiro ekuenderera mberi. Ini ndaizvifarirawo nekuti semunhu mudiki uye nemamiriro eanorarama, dzimwe nguva munhu anonzwa kushushikana uye pamwe asingade kuenderera nezvaari kuita, asi panogara paine chikonzero chakanaka chekuenderera.
Luis Mateo Diez munyori wechiSpanish anga ari nhengo yeRoyal Spanish Academy (RAE) kubvira 2001 aine chinzvimbo, kana "l" sachigaro. Iye anozivikanwa nemanoveli ake uye zvinyorwa, uye pakati pemabasa ake anonyanya kuzivikanwa ndiTsime reZera, Ruparadziko rweKudenga, Ngano dzeKunzwa.
Pindura kuna Dany J. Ureña.
Mabhuku 8 emadzimambo ezuva reMadzimambo. Yakasarudzika, nhema uye epic